त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बम राखेको छ भनेर कस्ले गरेकाे थियाे फाेन ? • Nepal's Trusted Digital Newspaperत्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बम राखेको छ भनेर कस्ले गरेकाे थियाे फाेन ? • Nepal's Trusted Digital Newspaper
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बम राखेको छ भनेर कस्ले गरेकाे थियाे फाेन ?
विमानस्थलमा बम पत्ता लगाउन कुकुरदेखि सेनासम्म परिचालन गरिएकाे थियाे
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनलमा बुधबार बिहान ९ः४० बजेतिर नेपाल बाहिरको नम्बरबाट फोन आएकाे थियाे। अफिसको एक्सचेन्ज नम्बरमा एकपटक मात्रै नभई दुईपटक फोन आयो। कुरा उही दोहोरियो। नम्बर नेपाल बाहिरको जस्तो देखिए पनि फोनमा बोल्नेले नेपालीमा बोले। भने, ‘सलाम वालेकुम। तपाईंको डोमेस्टिक टर्मिनल क्षेत्रको सात ठाउँमा बम राखिएको छ। दुई घण्टाभित्र बिस्फोट हुन्छ।’ टर्मिनल ड्युटी अफिसरले फोन उठाउनुभएकाे थियाे। पहिलो कललाई बेवास्था गर्नुभएका ती कर्मचारीले दोस्रोपटक पनि उही कुरा दोहोर्‍याउँदै फोन आएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीलाई जानकारी गराउनुभएकाे थियाे। कुरा संवेदनशील थियो।
सातवटा बम राखेको र दुई घन्टाभित्र बिस्फोट हुने जानकारी आएको कुरा ती अधिकारीले सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराउँदासम्ममा १० बजिसकेको थियो। फोन आएको नै १५ मिनेट कटेकाले सुरक्षा निकाय एकै छिनमा तैनाथ भए। फोन कसले गरेको भन्ने विषयभन्दा पनि बम निश्क्रिय पार्नु पहिलो काम थियो। किनभने विमानस्थलभित्र सुन तस्करीदेखि विमानस्थलको तारजालिबाट छिरेर विमानभित्र पुग्ने र ठूलो परिमाणमा सुन र विदेशी मुद्रा भेटिने घटना केही दिनअघि मात्रै भएका थिए। फ्रि कल एप ‘डिङटोन’बाट आएको कल कसले गरेको भन्ने विषयमा अहिले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले बताउनुभयाे।
दैनिक लाखौं यात्रु आवत–जावत गर्ने विमानस्थलमा सातवटा बम राखेको फोन आएपछि सुरक्षाका तीनवटै निकाय तैनाथ भए। सुघेर बम पत्ता लगाउने कुकुरदेखि अत्याधुनिक उपकरणका साथमा प्रहरी र सेना परिचालन भयो। बम डिस्पोज गर्ने सेना तयारीका साथ पुग्यो।
विमानस्थलका कुना–कुना जाँच भयो। शौचालयदेखि विमानका सबै ठाउँ खानतलासी भयो। उडानका सेवा रोकिए। अवतरण प्राथमिकतामा नै थियो। एक घन्टासम्म विमानस्थलको जाँचपछि सुरक्षा निकायले केही फेला पारेन। अचानक आएको फोनले यात्रुदेखि सुरक्षा निकाय एक घन्टा हैरान भए। ‘कुनै पनि शंकास्पद वस्तु भेटिएन। हामीले संवेदनशील भएर यात्रुलाई सुरक्षित बाहिर निकालेका थियाै। सुरक्षा निकायले पनि गम्भीर भएर अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाले भन्नुभयाे। बम डिस्पोजल टोलीद्वारा यात्रु बस्ने क्षेत्र, सुरक्षा जाँच गरिने क्षेत्रमात्र नभएर शौचालयहरूमा समेत सर्च गरेको प्रवक्ता सिटौलाले बताउनुभयाे।
सर्च अपरेसन सुरु गर्नुअघि एयरपोर्ट इमर्जेन्सी प्लानअनुसार अपनाउनुपर्ने सावधानी अपनाएर टर्मिनलभित्र रहेका यात्रु तथा सबै कर्मचारीलाई बाहिर निकाल्दा केही यात्रु त्रसित थिए भने केही सुरक्षा व्यवस्था कमजोर भएको भन्दै आक्रोशितसमेत भेटिन्थे। बम बिस्फोटको ‘थ्रेट’ दिने व्यक्तिबारे सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराइएको र सुरक्षा निकायले अनुसन्धान अघि बढाइसकेको सिटौलाले बताउनुभयाे।
विमानस्थलमा कुनै थ्रेट आएको खण्डमा बम नै राखिएको जस्तो मानेर अपरेसन गर्नुपर्ने उहाँ बताउँनुहुन्छ। ‘बम थ्रेट आएपछि यसलाई मजाकको रूपमा नलिई साँच्चिकै बम नै राखिएको हो भनेर हामीले त्यहीअनुसार काम गर्छौं’, उहाँले भन्नुभयाे, ‘किनभने त्यो थ्रेट साँच्चै हो कि झुटा हो भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले हामीले साँच्चै नै बमै हो भनेर काम गर्नुपर्छ।’
विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी प्रमुख एसएसपी भीम ढकालले थ्रेटकलबारे अनुसन्धान थालिएको जानकारी दिनुभएकाे छ। भने, ‘फोन गर्ने व्यक्तिबारे अनुसन्धान थालिसकेका छौं। अनुसन्धानपछि नै थप कुराहरू खुल्नेछन्।’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले यो घटना गम्भीर भएकाले यस्ता घटना हुन नदिन सुरक्षा निकाय सचेत बन्नुपर्ने बताउनुभयाे। ‘कहिलेकाहीँ यहाँ सामान्य घटना पनि भए। ती सबैलाई जोडेर विमानस्थलकै सुरक्षाको विषयमा सवाल गरिनु आवश्यक त छैन। तर, सचेत भने हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयाे। एक घण्टाभित्रै सर्च अपरेसन सकिएकाले डिले भएका सबै उडान रातिसम्ममा गन्तव्यमा पुर्‍याएको बताइएको छ।